पाण्डबखानीमा आयोडिन नुन सम्बन्धि १ दिने जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न ! – ebaglung.com
२०७४ फाल्गुन ७, सोमबार १९:१५	Top News, अन्य समाचार
सुरेश छन्त्याल, पाण्डबखानी २०७४ फागुन ७ । आयो नुन खाऔं स्वस्थ रहौं भन्ने नाराका साथ बागलुङको गलकोट नगरपालिका १० पाण्डबखानीमा साल्ट ट्रेडिङ कपेरिशन लिमिटेड बागलुङको आयोजनामा सोमबार १ दिने जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
गल्कोट नगरपालिका वडा नं १० पाण्डबखानीका अध्यक्ष तिलक घर्ती मगरको अध्यक्षतामा जनचेतना अभियानका साथ आज पाण्डबखानीमा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा आयो नुन के मा पाइन्छ ? आयोडिन कस्को लागि बढी आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा साल्ट ट्रेडिङ कपेरिशन लिमिटेड बागलुङका प्रमुख मनोज श्रेष्ठले प्रकाश पारेका थिए ।
पाण्डबखानी स्वास्थ चौकीका ईन्चार्ज अनिता कार्कीको स्वागत मन्तव्य संगै सुरु भएको कार्यक्रममा गलकोट नगरपालिका १० पाण्डबखानीका वडा सदस्य धनबहादुर सुनार, राधिका पुन, पत्रकार सुरेश छन्त्याल, समाजसेवी लालबहादुर विक,पृथ श्रीस विद्यार्थी, सुनौला दिनका महिला लगाएतको सहभागीता रहेको कार्यक्रममा जनजाति जेहन्दार गरिव गरि २० जनालाइ आयोडिन भएको व्याक र हजारौ दिनका २०जना महिलाहरुलाइ आयोडिन नुन प्रदान गरिएको थियो।
कार्यक्रमको संञ्चालन पाण्डबखानी स्वास्थ्य चौकीका अहेब देविन्द्र गरेरीले गरेका थिए ।
प्रजातन्त्र मावि माझखर्कको ५६ औँ बार्षिकोत्सव सम्प्न्न !